Gabadhaydu waxay rabtaa inay xidhato isqurxin, ma xilli hore baa? | Bezzia
Tony Torres | 12/01/2022 20:00 | Talada hooyooyinka
Marxalad kasta oo nolosha carruurtu waa ka duwan tahay, gaar ah oo dhammaan ka sarreeya, daran. Habka koriinka ee caruurtu way ka duwan yihiin mid kasta oo iyaga ka mid ah, si kastaba ha ahaatee, dhibaatooyinka iyo waqtiyada walaaca ayaa u yimaada dhammaan. Gaar ahaan marka ay dhallinyaradu soo dhawaato, oo ay aad u badan yihiin cilladaha hormoonnada iyo isbeddellada shakhsiyadda carruurta, taas oo ka dhigaysa in waalidku aanay si fiican u garanayn sida loo saxo.
Go'aan qaadashada marka ay timaado dhalinyaradu waa mid adag, sababtoo ah dareen ahaan waxay u muuqdaan dad waaweyn, laakiin dhab ahaantii waxay weli yihiin caruur. Carruurta kobcinaysa shakhsiyadooda, dhadhamintooda iyo hiwaayadaha ay maanta taagan yihiin lagu xidhay dhammaan macluumaadka ay ka helaan internetka. Taasina waa meesha ay carruurtu u ogaadaan adduunyada madadaalo iyo muran ka taagan tahay sida adduunka qurxinta.
1 Gabadhaydu waxay doonaysaa inay isqurxinta xidhato, laakiin waxaan filayaa inay goor hore tahay
1.1 Bar in ay is-qurxiso
Gabadhaydu waxay doonaysaa inay isqurxinta xidhato, laakiin waxaan filayaa inay goor hore tahay
Gabdho iyo wiilal badan ayaa aad u xiiseeya isqurxinta, maadaama ay caruur yihiin oo ay ku raaxaystaan ​​ku dayashada waxa ay dadka waaweyni sameeyaan ama labbiska ciyaaraan. Dhigashada isqurxintu iyagaa ciyaar u ah, inta ay tahayna, dhib kuma aha waalidka. Si kastaba ha ahaatee, Maxaa dhacaya marka gabadh yar ay tiraahdo waxaan rabaa in ay xirato isqurxin? Maxay ahayd qurxinta dadka waaweyn, si aad u baxdo, aaddo dugsiga ama wakhti la qaadato asxaabta.
Waqtigaas, waxa ugu badan ee caadiga ah waa inaad leedahay dareen aad ku dafiri karto naftaada, inaad u maleyso inay aad u yar tahay oo aad hortiisa ku muujiso. Wax shaki la'aan ku dhici kara qof kasta, in kasta oo ay weli tahay qalad. Sababtoo ah markuu ilmuhu rabi kuu sheego kuu ogolaanaya in aad aragto sida uu shakhsiyadiisa, wuxuu furmaa hortaada, wuxuu sameynayaa jimicsi kalsooni ah oo si aan la soo celin karin loo jebin karo.
Sidaa darteed, marka la helo wararka noocaas ah, waxa ugu horreeya oo ugu muhiimsan waa in la ilaaliyo xakamaynta oo aad si fiican u fekerto sida loo dhaqmo. Iska ilaali in aad ku tiraahdo wax ay dhibsato gabadha, ha u sheegin in ay gabar tahay iyo in ay ka weyn tahay, sababtoo ah waxa ugu badan ayaa ah in waxyaabo kale aad u sheegto in aysan ahayn gabar. Dhageyso rabitaankooda, weydii inuu kuu sheego nooca isqurxinta uu raboU sheeg inaad ka fikiri doonto oo aad ka doodi doonto wakhti kale.
Bar in ay is-qurxiso
Haddii gabadhaada ay rabto inay sameyso isqurxin, waxay sameyn doontaa, iyada oo raalli ka ah ama la'aanteed. Farqiga ayaa ah in haddii ay ku sameyso ogolaanshahaaga, waxaad u samayn doontaa si sax ah, oo leh alaabta saxda ah oo si tartiib tartiib ah u baranaya waxa la isku qurxiyo. Haddii aad ku sameyso si khiyaano leh, waa inaad isticmaashaa alaab jaban, amaahday ama tayadoodu liidato. Ma garanayso sida loo marsado, ama sida loo qurxiyo ayaa ka caawinaysa inay si fiican u ekaato, sababtoo ah taasi waa waxa la isku qurxiyo.
Waqtigaas waa inuu yimaadaa, sababtoo ah haddii gabadhaada ay muujiso rabitaankeeda ah in ay qurxiyo, mar dhow ama dambe way iman doontaa. Marka, ka caawi inuu ogaado adduunka qosolka leh ee qurxiyo, sababta waa mid xiiso leh oo baran kara waxyaabo badan ee ah. U kaxee inantaada oo soo iibsatid alaabteeda ugu horreysa, sababtoo ah waa lagama maarmaan inay isticmaasho waxyaalaha la isku qurxiyo ee da'da ku habboon.
Dooro qaar ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah in gabadhaadu ku farxi doonto, iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo dhammaan noocyada alaabta. Waxaad u soo iibsan kartaa qoyaan leh midab, kareem aad u dareere ah oo leh arrin ka hortag ah oo qorraxda oo sidoo kale ilaalin doonta maqaarkeeda. lipstick leh midab casaan ah, kaas oo aad ku aragto qaar ka mid ah bushimahaaga laakiin si qarsoodi ah. sidoo kale awood isticmaal qaar ka mid ah midabka dhulka ama hooska miro guduudan ee indhaha, badeeco sidoo kale kaa caawin doonta midabaynta dhabannadaada.
Waxyaabahan aasaasiga ah ee gabadhaadu waxay bilaabi kartaa bacda qurxinta. Adiguna, waxaad heli doontaa xasilloonida maskaxda ee ogaanshaha taas isticmaal alaabadooda, kuwaas oo tayo leh, oo ku habboon da'dooda iyo midabyo aan ka dhigi doonin inay u ekaato mid da' weyn ama is qarinaysa. Sidan ayay ku farxi doontaa, waxay dareemi doontaa in la maqlay, la fahmay, marka ay u baahato inay kula hadasho, waxaa abuurmi doona kalsooni qaali ah. Wax shaki la'aan ah waa u qalantaa, inkastoo tani ay lagama maarmaan tahay in aad u ogolaato in gabadhaada ay dhigto qurxinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Talada hooyooyinka » Gabadhaydu waxay rabtaa inay xidhato isqurxin, ma goor hore baa?